के छ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा ? पूर्ण पाठ पढ्नुहोस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के छ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा ? पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्
\_विश्वव्यापी यो महामारीले समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्नसक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन नदिन सरकारले छिट्टै उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउने नै छ । उद्यमी तथा श्रमजीवी– श्रमको संसारका सबै सहयात्रीहरुमा यस महामारीले सिर्जना गर्नसक्ने प्रतिकूलताप्रति सरकार संवेदनशील छ र त्यसलाई संबोधन गर्ने नै छ ।
चैत ७ गते, २०७६ - १८:४९ मा प्रकाशित